မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်နည်းပညာဖြင့် တစ်ကြိမ်သာထိုးရန်လိုအပ်သည့်COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ် - Xinhua News Agency
တရုတ် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည့် CanSino Biologics ကုမ္ပဏီက မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှု မှတ်တိုင်သစ်ဖြစ်လာမည့် အက်ဒီနွိုက်တစ်ရှူးတွင်ရှိသည့် ဗိုင်းရပ်စ်၏ DNA အပေါ်အခြေခံကာ “ ဘက်တီးရီးယားအရှင်များအားဖြည့်သွင်းပြီး ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သည့်” COVID-19 ကာကွယ်ဆေး “fill and finish” “ပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်းမှု နှင့် အချောသတ်မှု”ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာအား လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။မလေးရှားဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Solution Biologics မှ deputy group managing director ဖြစ်သူ Mohd Nazlee Kamal က ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုအား တရုတ်နိုင်ငံ CanSino ကုမ္ပဏီနှင့် ရင်းနှီးခင်မင်စွာ အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
Cansino ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် တစ်ကြိမ်သာထိုးနှံရသည့်ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ Solution Biologics ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံ ထျန်းကျင်းမြို့ရှိ CanSino စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ရေ သန်းဝက်စာ နှင့် ကျန်သည့်ကာကွယ်ဆေးများအား မလေးရှားနိုင်ငံ တွင် “fill and finish” “ဖော်စပ်မှု နှင့် အချောသတ်မှု” COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ စုစုပေါင်း ၃.၅ သန်းစာအား မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရသို့ ထောက်ပံ့မည့် သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုကို မလေးရှားနိုင်ငံ အစိုးရ နှင့် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
အမျိုးသားဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအေဂျင်စီမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့် CanSino ကုမ္ပဏီထုတ် (Adenovirus Type5Vector) အမျိုးအစား နိုဗယ်လ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးမှာ ထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးကာ အသုံးပြုရန်အသင့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းထုတ် “fill and finish” ကာကွယ်ဆေးများကိုလည်း ယခုနှစ်မကုန်ခင် အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းရည်မှန်းထားသည်။
Mohd Nazlee က တစ်ကြိမ်သာထိုးနှံရန်လိုအပ်သည့်ကာကွယ်ဆေးမှာ အလွန်အကျိုးများကြောင်း အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများ နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများအတွက် အထူးအဆင်ပြေကြောင်း နှင့် ထိုကာကွယ်ဆေးများအား သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ သတ်မှတ်ထားသောခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုသင့်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကာကွယ်ဆေးဟာ ဆေးတစ်ကြိမ်သာထိုးနှံရတဲ့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း အဆင်ပြေသလို ဒုတိယအကြိမ်ဆေးလာထိုးဖို့ ခက်ခဲတဲ့ခရီးကိုလာရတဲ့သူများအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
Malaysia to make adenoviral vector vaccine against COVID-19 with Chinese technology
KUALA LUMPUR, Sept.9(Xinhua) — Chinese company CanSino Biologics has helped Malaysia cross another milestone in vaccine manufacturing, this time by transferring technology to enable the local “fill and finish” of the COVID-19 vaccine based on the adenovirus platform.
Approval has been given by the National Pharmaceutical Regulatory Agency for the Convidecia Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type5Vector) developed by the CanSino, with the finished product already in use, while the local “fill and finish” products are expected to be ready before the year’s end.
He noted that “our vaccine will just spot on in terms of delivering the solution to vaccinate the people inasingle shot,” sparing the second hard trip for people in those areas to takeasecond jab. Enditem